Mifanaraka amin'ny fampidirana ny marika Novotel ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mifanaraka amin'ny fampidirana ny marika Novotel ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo
Accor Vondron'olona mandray vahiny dia manambara ny laharam-pahamehan'ny marika afovoany nahomby Novotel ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo (DRC). Izany dia taorian'ny fanasoniavana ny fananana telo nandritra ny Forum momba ny fampiasam-bola amin'ny hotely Africa (AHIF) mitranga any Etiopia amin'ity herinandro ity.
Ny vondrona dia niara-niasa tamin'ny Compagnie Hôtelière et Immobilière du Congo (CHIC), fananan'ny mpiombon'antoka DRC mitarika, hanokatra ny fananana Novotel ao an-drenivohitra, Kinshasa, sy ireo ivon-toeram-pitrandrahana roa any atsimo, Lubumbashi ary Kolwezi, nampiditra 337 lakilen'ny firenena lehibe indrindra aty Afrika atsimon'i Sahara.
Ity fifanarahana ity dia mampahafantatra ny sonia nataon'i Novotel ho an'ny firenena lehibe indrindra fahefatra sy ny firenena Francophone, izay manana ny laharam-pahamehan-dry zareo mandray vahiny ary mandray an-tanana ny fangatahana mazoto mandray vahiny maoderina manerantany izay mifanaraka amin'ny filan'ny vondrom-piarahamoniny sy ny mpandehanan'izy ireo eo an-toerana.
"Miaraka amin'i Afrika ho tsena iraisam-pirenena manaraka sy DRC iray amin'ireo toekarena mitombo haingana indrindra amin'ny kaontinanta manana sokajy antonony manankarena, ara-potoana ny fotoana hampidirana ny mariky ny fomba fiainantsika antenantenany eo amin'ny tsena fitomboana telo lehibe", hoy i Mark Willis, CEO, Accor Moyen Orient & Africa.
"Faly izahay hiara-hiasa amin'ny CHIC manam-pahaizana eo an-toerana hampivelatra ny fisian'i Novotel ao amin'ity toeram-pitrandrahana harena ankibon'ny tany manerantany ity, amin'ny fananganana ny fahombiazan'ny marika any amin'ny toerana afrikanina hafa ary hanamafisana ny paikadim-pampivoarana haingana eto amin'ny kaontinanta."
DRC no mpamokatra voanio kobaltaly lehibe indrindra eran-tany, mpamokatra varahina sy diamondra lehibe, ary mitentina US $ 24 trillion amin'ny tahiry mineraly mbola tsy voadinika.
Andriamatoa Farhan Charaniya, Lehiben'ny Fampandrosoana ho an'ny CHIC dia nanambara fa ny "CHIC, orinasa natokana ho an'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny, dia tapa-kevitra ny handray anjara biriky amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ao amin'ny DRC, firenena iray manana harena voajanahary betsaka sy renivohitra olombelona izay mahatsapa fitomboana lehibe eo amin'ny fizahan-tany fandraharahana. Mifantoka amin'ny fampivoarana hotely manara-penitra manerana ny firenena i Chic ho fanohanana ny fitomboan'ny fitomboan'ny DRC ary faly izahay miara-miasa amin'ny Accor amin'ny fanatratrarana an'io tanjona io. ”
Ny renivohitra Kinshasa, dia ivon-toeran'ireo orinasa iraisam-pirenena, andrim-panjakana, biraom-panjakana, masoivoho ary foiben'ny ONG, ary ny Novotel Kinshasa 115 manan-danja, izay efa vita hatramin'ny desambra 2020, dia ho hita eo amin'ny lafiny tetikady akaiky azy rehetra, miaraka amina prime adiresy ao amin'ny Avenue Bandundu ao afovoan-tanàna.
Ao Lubumbashi, tanàna faharoa lehibe indrindra an'ny DRC sy renivohitra mpitrandraka azy, ny Novotel Lubumbashi, manan-danja 120, izay eo am-pananganana ny làlambe misy ny tanàna akaikin'ny farihy, akaikin'ny fialam-bolan'ny fianakaviana 'La Plage' , fampandrosoana ara-pahasalamana sy fialamboly.
Any atsimon'ny DRC sy renivohitry ny Faritanin'i Lualaba, i Kolwezi dia ivon-toeram-pitrandrahana lehibe ho an'ny varahina sy kobalta. Novotel Kolwezi manana tombana 102, izay efa vita hatramin'ny desambra 2022, dia ho hita eo amin'ny làlambe, manakaiky ireo orinasa mpitrandraka iraisam-pirenena marobe misy foibe eto an-tanàna.
Miaraka amin'ny rivo-piainana tsy manam-paharoa nefa mavitrika, toerana malefaka sy toerana malalaka ho an'ny besinimaro ary fampitaovana maoderina, ny trano fandraisam-bahiny telo dia antenaina hametraka haingana ny toerany ho foiben'ny orinasa, fialam-boly, fivoriana ary fiaraha-miombon'antoka amin'ny tanànany avy, malaza amin'ny mpandeha orinasa sy orinasa eo an-toerana ary ny mponina dia mitovy.
Accor dia efa miasa fananana roa eo ambanin'ny marika Pullman avo lenta ao amin'ny DRC - ny Pullman Kinshasa Grand Hotel ary ny Pullman Grand Karavia any Lubumbashi.
Ny fanaovan-tsonia Novotel telo heny dia miorina amin'ny firoboroboan'ny marika any amin'ny faritra hafa any Afrika Atsimon'i Sahara - teboka iray amin'ny paikadim-pampandrosoana an'i Accor - miaraka amin'ny Vondrona nanao sonia fifanarahana hitantana ny Novotel Victoria Island Lagos 160 any Nizeria.
Fanalahidy maherin'ny 3,942 no napetraka ho an'ity faritra ity manerana ny firenena toa an'i Nizeria, Nizeria, Côte d'Ivoire, Senegal, DRC, Etiopia, Kenya, Mozambika, Rwanda ary Zambia.
Accor dia miasa amina efitrano 25,826 amin'ny trano fandraisam-bahiny 164 manerana ny firenena 22 atsy Afrika ary manana 13,642 61 fanalahidy bebe kokoa amin'ireo trano XNUMX nosoniavina na eo am-pandrosoana.
Airbus Corporate Jets dia mandefa famantaranandro vaovao miaraka amin'i Richard Mille
Tsidiho ny California Luxury Forum izay voamarina tamin'ny martsa 2020